Startup to Shake Up Myanmar’s Garbage Industry
Perhaps nowhere are the dangers and opportunities of trash as clear as in the back alleys of Yangon and the Ayeyarwady River, where the rampant practice of open dumping and the problematic waste management in Myanmar are on daily display. By overthrowing the traditional linear model of truck and tip...
Myanmar’s first hostel Startup Plans to Bring Silicon Valley Culture to the country
There are three things the Draper Startup House Yangon is full of – young startups, entrepreneurs and worldwide travelers. Takeaseat at the hostel’s watering hole,abar supported by HAPA Coffee & Cocktail, and the murmurs of startups, VCs, entrepreneurs and digital nomads at neighboring tables will...
Written by Zin Thu Tun and Myo Sandar Covid-19 Fund ချေးငွေမှ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းပေါင်း(၁၁၃)အား ချေးငွေထုတ်ချေး ခွင့်ပြုကြောင်း ဧပြီ(၂၈)ရက်၌ စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ပထမအကြိမ်ကို ဧပြီ(၉)ရက်တွင် လုပ်ငန်းပေါင်း(၈၈)ခုအား ကျပ်(၆)ဘီလီယံနီးပါး ချေးငွေထုတ်ယူ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ယခုဒုတိယအကြိမ်တွင် ထုတ်ချေးမည့်ငွေပမာဏကိုမူ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပေ။ Covid-19ကြောင့် လတ်တလောစီးပွားရေးထိခိုက်မှု အများဆုံးခံစားရသောလုပ်ငန်းများမှ CMP လုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး ကုစားရမည့် ကဏ္ဍများအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ Covid-19 Fund အဖြစ် ကနဦးကျပ်ဘီလီယံ(၁၀၀)မတည်ကာ ချေးငွေများကို ထုတ်ချေးလျက်ရှိသည်။ ယင်းကဏ္ဍများမှ လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့်ချေးငွေလျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း မတ်လ(၂၉)ရက်၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ချေးငွေလျှောက်ထားသူ...
We are finding ways to manage cash flow through distribution channels: Wave Money
If you want to withdraw cash from your bank account in Myanmar, you need to get up as early as at least4a.m and go to an ATM-not any ATM but ATM where your bank chooses to refill cash. Then wait for hours to have your turn to...
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Ascent Myanmar Growth Fund I LP (AMGF), Myanmar-Focused private equity fund owned by Ascent Capital Partners Pte. Ltd,aSingapore-registered fund management firm, has madeacombined $26 million minority investment in Frontiir Pte. Ltd, an internet service provider under the name Myanmar Net. “By supporting Frontiir, a...
Myanmar ranked 28th in the COVID-19 Recovery Index
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် Myanmar is ranked at 28 out of 184 countries in the Global COVID-19 Recovery Index conducted by PEMADU Associates in cooperation with the Ministry of Science and Innovation (MOSTI) of Malaysia and the Sunway group. It usesadata analysis system to find out how well each country had responded...